Gurigaaga jannada ku jira? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ma waxaad sugeysaa hoygaaga jannada?
Laba heesood oo caan ah oo caan ah ayaa lagu yiri: "Guri aan deganeyn ayaa i sugaya" iyo "Gurigeygu waa midig buurta gadaasheeda". Erayadaani waxay ku saleysan yihiin ereyada Ciise: «Guryo badan ayaa ku yaal guriga aabbahay. Haddii aysan ahayn, waxaan ku dhihi lahaa: Waxaan kuu diyaarinayaa goobta adiga? (Yooxanaa 14,2). Aayadahan ayaa sidoo kale badanaa laga soo xiganayaa aaska sababta oo ah waxay ballan qaadayaan in Ciise dadka jannada ku siin doono abaalmarin dadka sugaysa dhimashada kadib. Laakiin muxuu Ciise rabay inuu yiraahdo? Waa khalad haddii aan isku dayno inaan xiriirno erey kasta oo Rabbigeenna si toos ah nolosheena ula xiriirto, iyadoo aan loo eegeynin waxa uu isku deyey inuu u sheego kuwa wax ku soo dara ee waqtigaas.
Habeen ka hor geeridiisa, Ciise wuxuu xertiisii ​​la fadhiyey hoolka karaarada. Xertii waa yaabeen markay arkeen oo ay maqleen. Ciise cagihiisa ayuu maydhay, wuxuu shaaca ka qaaday in uu jiro nin gacan haye ku ah, waxa uuna cadeeyay in Butros uu gacangelin doono hal mar kaliya laakiin seddex jeer. Ma qiyaasi kartaa waxay ugu jawaabeen? «Kani kani ma ahan Masiixa. Wuxuu ka hadlayaa silica, khiyaanada iyo dhimashada. Waxaanna u maleynay inuu yahay hordhaca boqortooyo cusub oo aan isaga wax la xukumi doonno! » Jahawareer, rajo xumo, cabsi - shucuur aan wada ognahay. Waxyaabaha laga filayo. Ciisena wuxuu u tiriyey waxyaalahaas oo dhan: «Ha welwelin! I aamin! Wuxuu rabay inuu xertiisii ​​dhiso si maskaxiyan ah marka loo eego ifafaalaha naxdinta leh ee soo socota wuxuuna sii waday: "Guryo aabbahay wuxuu ku yaal guryo badan".
Laakiin maxay ereyadan xerta ku yidhaahdeen? Ereyga "gurigii aabbahay" - sida loogu adeegsaday injiillada - waxaa loola jeedaa macbudka ku yaal Yeruusaalem (Luukos 2,49, Yooxanaa 2,16). Macbudkii ayaa beddelay taambuuggii, teendhadii la qaadi jiray ee ay reer binu Israa'iil u isticmaali jireen caabudidda Ilaah. Gudaha taambuugga gudahiisa (laga soo bilaabo lat. dwaculin = teendhadii, teendhadii) - oo ay ka soocday daaqad qaro weyn - waxay ahayd qol loogu magac daray Karaamada Barakeysan. Taasi waxay ahayd gurigii Ilaah ("Taambuugga" oo af Cibraaniga ah waxaa loola jeedaa "Mishkan" = "Meel la deggan yahay" ama "joog") oo ku dhex jira dadkiisa. Sannadkii hal mar, wadaadka sare kaligiis ayaa kaligiis ahaa inuu qolka soo galo si uu uga warqabo jiritaanka Ilaah.
Intaa waxaa sii dheer, ereyga "guri" ama "barxad nololeed" macnaheedu waa meesha aad ku nooshahay, iyo "waxay ahayd af Griig hore (luqadda Axdiga Cusub) guud ahaan maahan degsi joogto ah oo aad ku degto, laakiin waa is-xareyn safar ah oo kuu geynaysa meel kale mustaqbalka fog.  Tani waxay ka dhigan tahay wax aan ahayn Jannada lala jiro Ilaah markuu dhinto; maxaa yeelay jannada ayaa badanaa loo arkaa inay tahay hoygii ugu dambeeyay iyo kan ugu dambeeya ee nin.
Ciise wuxuu hadda yiri inuu xertiisii ​​u diyaariyo inay joogaan. Halkee ayuu aadi karaa Jidkiisu waa inuusan toos ugu kaxayn jannada inuu guryo ka dhiso halkaas, laakiin laga bilaabo hoolka sacrament ilaa iskutallaabta. Dhimashadiisa iyo sarakicistiisa, wuxuu ahaa inuu meel uga diyaarsado guriga reerka aabbihiis (Yooxanaa 14,2). Waxay u muuqatay inuu doonayo inuu yiraahdo: «Wax walba gacanta ayaa lagu hayaa. Waxa dhici doona waxay u muuqan karaan kuwo xun, laakiin dhammaantood waa qayb ka mid ah qorshaha badbaadada. Ka dib wuxuu ballanqaaday inuu soo laaban doono. Macnaha guud, uma muuqdo inuu yahay qof rabshad badan (Imaatinka labaad) (in kasta oo dabcan aannu sugaynay muujinta Masiixa ee sharafta leh maalinta u dambaysa), laakiin waxaan ognahay in jidkii Ciise inuu u horseedi karo iskutallaabta iyo inuu ku soo noqon doono saddex maalmood ka dib sidii mid la soo sara kiciyey. Wuxuu Malachi kale ku soo noqday qaab Ruuxa Quduuska ah maalintii Bentakostiga.
«... Waxaan rabaa inaan soo noqdo oo aan ku qaato si aad u joogto meesha aan joogo» (Yooxanaa 14,3), Ciise ayaa yidhi. Aynu si yar u soo qaadno ereyada "aniga" ee halkan lagu isticmaalo. Waa in loo fahmaa isla dareenka ereyada ku jira Injiilka Yooxanaa 1,1 kaasoo ku dhawaaqaya wiilka (das Wort) bei Gott war. Was auf das griechische «pros» zurückgeht, das sowohl «zu» als auch «bei» heissen kann. Mit der Wahl dieser Worte zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn verweist der Heilige Geist auf deren innige Beziehung zueinander. In einer Bibelübersetzung werden die Verse wie folgt wiedergegeben: «Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich...» 
Nasiib darrose, dad aad u tiro badani waxay u maleeyaan Ilaah inuu jannada ku jiro sidii qof kaligiis ah oo meel fog naga fiirinaya. Erayada u muuqda kuwo aan micno lahayn "aniga" iyo "at" waxay ka tarjumayaan wajiyo gebi ahaanba ka duwan oo ahaanta rabbaaniga ah. Waxay ku saabsan tahay ka qeybqaadashada iyo isku soo dhawaanshaha. Waa waji waji ka waji. Waa qoto dheer oo isjiidjiid ah. Laakiin muxuu taas ka qabaa aniga iyo adiga maanta? Kahor intaanan ka jawaabin su’aashaas, bal aan si kooban dib u eego macbudka.
Markii Ciise dhintay, daahkii macbudka ayaa kala badh kala jeexjeexay. Dillaacaani wuxuu calaamad u yahay qaab cusub oo loo wajahayo jiritaanka Ilaah, kaasoo ku furmay. Macbudku gurigiisii ​​ma ahayn. Xiriir cusub oo Ilaah lala yeesho wuxuu hadda u furnaaday qof kasta. Tarjumaadda Baybalka Wanaagsan waxaan ka akhrinay aayadda 2aad: "Guryo aabbahay wuxuu leeyahay guryo badan" Karaamada barakaysan waxaa jiray hal qol oo keliya hal qof, laakiin hadda waxaa jiray is-beddel xag-jir ah. Runtii, Eebbe wuxuu u abuuray qofkasta oo gurigiisa jooga! Tani waxay suurtogal u ahayd maxaa yeelay wiilku wuxuu noqday jidh wuxuuna inaga furtay dhimashada iyo awooda baabi'inta ee dembiga, wuxuu ku noqday aabihii oo aadanaha oo dhan ku soo jiiday Ilaah hortiisa (Yooxanaa 12,32). Isla habeenkaas Ciise wuxuu yidhi: "Kan i jecel wuxuu ereygayga xajin doonaa; aabbahay isaguna waa jeclaan doonaa isaga, waana u tagi doonnaa oo waan la noolaan doonnaa » (Yooxanaa 14,23). Sida ku xusan aayadda 2aad, waxaan ka hadlaynaa "guryo" halkan. Miyaad garatay micnaha taasi?
Fikradahee noocee ah ayaad la wadaagaysaa guri wanaagsan? Malaha: nabad, xasillooni, farxad, badbaadin, hagitaan, is cafin, taxaddar, jacayl shuruud la’aan ah, aqbalaad iyo rajo, inaad magacyo dhawr ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, Ciise ma uusan u imaanin dhulka oo keliya inuu qaato ciqaabta dhimashada, laakiin sidoo kale inuu la wadaago dhammaan fikradahan la xiriira guri wanaagsan iyo inuu noo oggolaado inaan aragno nolosha isaga iyo aabihiis ay wadaageen Ruuxa Quduuska ah ayaa hogaamiya.
Xiriirka cajiibka ah, khaaska ah ee u gaarka ah ee Ciise laftiisu uu la lahaa Aabihiis ayaa sidoo kale annaga noo furan: "Markaa adigu meeshaad joogtid" waa sida aayadda 3aad sheegtaa. «Bulshada ugu dhow aabaha» (Yooxanaa 1,18:3, Good News Bible) ama, sida tarjumaadaha qaarkood ay yiraahdaan: "aabaha aabbaha". Saynisyahan ayaa sidan dhigaya: "In lagu nasto qof dhabta dhabta ka ah waxay la micno tahay inuu ku seexdo gacmihiisa, in loo qiimeeyo isaga inuu yahay hadafka daryeelka ugu dhow iyo kalgacalka banaanka, ama, sida odhaahdu ay tahay, inuu noqdo saaxiibka laabta laabta." [XNUMX] Ciise baa jira. Oo xagaynu joognaa hadda? Waxaan qayb ka nahay boqortooyada jannada (Efesos 2,6)!
Ma ku jirtaa xaalad adag, niyad jab, xaalad niyad jab leh hadda? Ku kalsoonow: Erayadii Ciise ee raaxada ayaa lagaran doonaa adiga. Siduu mar mar rabay inuu dhiiri geliyo, dhiiri geliyo oo xoojiyo xertiisii, isla sidaas ayuu isna adiga kugula dhaqmaa: «Ha walwelin! I aamin! Ha u ogolaan walwalkaaga inuu ku jahwareero, laakiin isku halleeya Ciise oo ka fikir waxa uu dhaho - iyo wuxuu ka tago oo aan aamin ahayn! Kaliya ma dhaho inay tahay inay noqdaan geesinimo wax walbana si sax ah ayey u noqon doonaan. Kuu dammaanad qaadi maayo afarta tallaabo ee farxadda iyo barwaaqada. Isagu ma ballanqaado inuu ku siin doono guri jannada dhexdeeda oo aad qaadan karto oo keliya marka aad dhimato - oo sidaas daraadeed ay u qalanto dhammaan dhibaatooyinkaaga. Hase yeeshe, wuxuu caddeeyay inuu u dhintay dhimashadii iskutallaabta inuu ku qaado dembiyadeenna oo dhan, inuu iskutallaabta ku qodbo isaga iskutallaabta, si wax walba oo Ilaah naga fogeeya iyo nolosha gurigiisa lagu soo furto.
Laakiin taasi maahan. Si kalgacal leh ayaad ugu lug leedahay nolosha saddex geesoodka ah ee Eebbe si aad weji weji ula wadaagid wehelnimo xagga aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah - nolosha Ilaah. Wuxuu doonayaa inaad adigu qayb ka noqoto isaga iyo wax kasta oo uu isagu u taagan yahay hadda. Wuxuu dhahay: "Waxaan ku abuuray si aad ugu noolaato gurigayga."
Aabe aabbe, waxaan kuugu mahadnaqaynaa mahadnaq aad kuu qabtid, kaasoo u yimid inuu nagala kulmo wiilkaaga markii aan weli kaa go'nay oo aad guriga noo keentay! Dhimasho iyo nolol intuu noo sheegay jacaylka aad noo qabtid, nimco na siisay oo albaabka sharaf inoogu furay. Aynu wadaagno xubnaha jidhka Masiixa sidoo kale aan ku noolaan doonno noloshiisa sarakicisay; oo kuweenna koobkiisa wax uga cabba waxaan dhammaynaynaa nolosha kuwa kale. oo kuweenna Ruuxa Quduuska ahu iftiin u yahay dunida. Ii dhawr rajadii aad noo ballanqaadday, in aannu carruurtayada oo dhan xor u ahaanno, oo dunida oo dhammuna ay magacaaga ammaantaan xagga Rabbigeenna Ciise Masiix. Aamiin 
 NT Wright, Waxaa la yaabiyay Rajada (Jarmal: rajo la yaab leh), bogga 150.
 Rick Renner, Oo Loogu Talo Dilay (Cinwaanka Jarmalka: Dagaal diyaar u ah), bogga 445; halkan laga soo xigtay Kitaabka Wanaagsan.
 Edward Robinson, Giriig iyo Ingiriis Lexicon ee NT ah (Jarmal: Griig-Ingiriis Lexicon ee Axdiga Cusub), bogga 452.
 Salaadda ka dib Wadajirka Quduuska ah iyadoo loo eegayo sharciga Eucharistic ee Kaniisadda Episcopal ee Scottish-ka, oo laga soo xigtay Michael Jinkins, Martiqaad xagga Fiqiga. (Eng.: Hordhaca cilmiga fiqiga), bogga 137.